မြွေပါဖြူ (သို့) အဖြူရောင်မြွေပါမြီးတို (Stoat) ကို ပါဏဗေဒ အလိုအရ မတ်စတီလာ အာမီနီယာဟု ခေါ်သည်။ ကမ္ဘာ့မြောက်ပိုင်းဒေသ အလွန်အေးသော နေရာ များတွင် မြွေပါဖြူ၏ ဆောင်းရာသီအရောင်မှာ အဖြူရောင် ဖြစ်သည်။ သို့သော် အမြီးဖျား၏ အရောင်မှာ အစဉ်သဖြင့် အမည်းသာဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့ ဆောင်းရာသီ၌ မြွေပါဖြူ၏ အမွေးရောင် ပြောင်းလဲသွားခြင်းသည် မြွေပါဖြူအား အထူး အဆင်ပြေစေသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ရေခဲပြင်ပေါ်တွင် သားကောင်များအား ယင်တို့၏ရန်သူ လိုက်လာသည်ကို မမြင် စေနိုင်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ မြွေပါဖြူသည် သေးသွယ်သော် လည်း သတ္တိရှိ၍ လျင်မြန်သည်။ ထို့ပြင် အငြိမ်မနေဘဲ သတ် ဖြတ်လိုသည့်ဆန္ဒရှိသော တိရစ္ဆာန် ဖြစ်သည်။
မြွေပါဖြူမျိုးစိတ်ကို သမပိုင်းနှင့် အအေးလျော့ပိုင်းဒေသ များတွင် မူရင်းဒေသအဖြစ် တွေ့ရသည်။ ချုံများ ရှိရာနှင့် ကျောက်ပေါများရာ ဒေသများတွင် နေထိုင်သည်။ ထို့ပြင် ပွေးကောင်နှင့် အခြားတွင်းအောင်း တိရစ္ဆာန်များ စွန့်ပစ်သွား သည့် တွင်းဟောင်းများတွင်လည်း နေထိုင်သည်။ တိရစ္ဆာန် ကလေးများ၊ ငှက်နှင့် ဥများသည် မြွေပါဖြူတို့၏ အစာဖြစ်ကြ ၏။
↑ Reid, F. (2016). "Mustela erminea". IUCN Red List of Threatened Species 2016. IUCN.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မြွေပါဖြူ&oldid=718522" မှ ရယူရန်